WordPress Kpọtụrụ withdị na Spam Protection Version 2.0.0 Released! | Martech Zone
WordPress Kpọtụrụ withdị na Spam Protection Version 2.0.0 Released!
Sunday, May 6, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Melite: Aga m akwado Dị ndọda site na RocketGenius n'ihi na a nnọọ siri ike ụdị mwekota na WordPress!
N'ime ihe karịrị 140 kwuru, ụdị kọntaktị WordPress na Nchedo Spam abụrụla, ihe kachasị ewu ewu nke m nyeere aka ịzụlite. E meela ya iri puku kwuru iri puku na post bụ ihe kachasị ewu ewu na weebụsaịtị m. Enweela m ọtụtụ nzaghachi na ngwa mgbakwunye ma mechaa kpebie ime ya, na-etinye ọnụ niile ndụmọdụ ndị ndị na-agụ akwụkwọ m nwere!
Lee ụfọdụ atụmatụ:
Ikike imepụta ndepụta ndepụta ndepụta.
Ike ime ka ihe ịma aka zaa ikpe ma ọ bụ adịghị.
Mgbakwunye ndị ọzọ iji gbochie mkpado ederede site na nyochaa n'ubi ndị agafe.
Ikike ịtọlite ​​akara ederede ndabara ma ọ bụ kwe ka onye ọrụ tinye aka na nke ha.
Nhazi mara mma nke nwere ubi mara mma.
Ọ bụrụ na ị nweta nkwalite na mbipute a (2.0.0), biko mara na ị ga-agbanwe koodu ahụ na kọntaktị kọntaktị gị nke na-etinye koodu ahụ. Ọ na-abụbu okwu, ma ugbu a, ọ bụ eriri na-agbanwe agbanwe.
Gaa na Project Page maka nkọwa ndị ọzọ na njikọ njikọta!
Ntughari aka nke mba, ime obodo, ngbanwe, Iceland na ntụgharị nke Weebụsaịtị Photo Cat
Mee 6, 2007 na 8: 29 PM
Nnukwu ọrụ, Na-arịa ọrịa na-eji nke a na saịtị ọhụrụ m na-emepe ugbu a.
Mee 6, 2007 na 9: 15 PM
Daalụ Wes! O were m ọnwa ole na ole ijide ọrụ m chọrọ iji ngwa mgbakwunye a. Enwere m olile anya ime ka ọ bụrụ ọtụtụ asụsụ ma gbakwunye ụdị ịhazi onwe gị n'ọdịnihu… naanị chọrọ ị nweta onye a ugbu a!
Mee 6, 2007 na 11: 41 PM
M na-eji iFrames na ụdị HTML ndị ọzọ tupu nke a. Ma ugbu a, echere m na m ga-anwale ụdị usoro a ugbu a.
Mee 7, 2007 na 8: 48 AM
Ihe ndozi! Aga m enwe ike iwulite ụdị kọntaktị WP m dị na nke a. Usoro usoro omenala bụ nnukwu mgbakwunye.
Aga m etinye ya na ndepụta ngwa mgbakwunye na wpZipper.
You nwere ike ịtụle ịnye ya aha ọhụrụ, yabụ ndị mmadụ nwere ike ịkọwa ya nke ọma site na ngwa mgbakwunye ụdị kọntaktị gara aga.
Karr Kpọtụrụ? (M guzogidere iji okpukpu abụọ "K")
Mee 7, 2007 na 9: 59 AM
Echere m na ịgbanwe aha a n'oge a nwere ike ịbụ echiche na-adịghị mma - ebudatara ya ọtụtụ iri puku oge ma ọ bụ, na nke m, peeji m kacha arụ ọrụ. Ọzọkwa… na-akpọ, “WordPress Kpọtụrụ withdị na Spam Nchedo”, nwere ịrịba SEO uru. 🙂
Mee 7, 2007 na 8: 19 PM
Ah, Achọghị m ịtụle akụkọ ihe mere eme nke ngwa mgbakwunye gị. Ee, igbanwe aha ahụ na-ada ka echiche na-adịghị mma n’echiche nke abụọ.
Mee 7, 2007 na 8: 12 AM
Ndewo Douglas, ejibeghị m ngwa mgbakwunye a, mana enwere ike itinye ya na blọọgụ m n'ọdịnihu dị nso.
Amaghịdị m na ị na-emepe ụdị ihe ndị a, enwere ike m ga-akwụsị ọtụtụ oge.
Mana, ọzọ, achọrọ m ịdaba wee sị hi. Ọ dị ka otu ọnwa ma ọ bụ karịa kemgbe m kwuru hi.
Mee 7, 2007 na 8: 20 AM
Nabata gị, m ga-ahụ gị n'anya ịlele oge karịa. 🙂
Nwere ike ịlele niile mmepe oru na m Ibe oru ngo. Enweekwara m weebụsaịtị ole na ole na-emepe emepe nke kwesịrị ịmị mma!
Mee 7, 2007 na 1: 55 PM
Douglas, na nkume. Daalụ nke ukwuu maka ịme nnukwu ngwa mgbakwunye na achọtalarị m bara uru na saịtị m mere maka enweghị uru yana echere m na m ga-ahụ uru ọzọ na saịtị m na-emere nwanne m nwoke na-ese ihe .
Mee 7, 2007 na 3: 56 PM
Bet nzọ, John! Daalụ maka ụdị okwu ahụ. Ọ bụrụ n’ị nwere ike iche maka ụfọdụ njirimara ndị ọzọ, egbula oge itinye m ahịrị.
Mee 7, 2007 na 1: 15 PM
Nnukwu ọrụ Doug. Enwere m obere nsogbu ịnweta nke a ka ọ rụọ ọrụ na mbụ, mana achọtara m ihichapụ ibe kọntaktị ochie m na ịmepụta nke ọhụrụ mere aghụghọ ahụ.
Mee 7, 2007 na 3: 57 PM
Daalụ Dean. Enwere m nsogbu na WP-Cache na-echekwa ya n'agbanyeghị agbanyeghị. M merụrụ ahụ na-agbanyụ ya ruo mgbe m nwetara peeji ebe m chọrọ ya wee tụgharịa na-echekwa azụ.
Mee 8, 2007 na 3: 10 PM
Nnukwu ọrụ ọzọ Doug! The kọntaktị ụdị anya nke ukwuu nkwafu, Akpara m na-agbakwunye ya na m na saịtị ka anya dị ka m ga-esi a nkeji ole na ole extra
Mee 10, 2007 na 7: 43 PM
Na-ewepụta oge oge dee ihe dị mma! Enwere m ekele maka ya!
Mee 10, 2007 na 8: 02 PM
Enweghị nsogbu Doug - ị na-arụ ọrụ dị ukwuu na blọọgụ a, yabụ ị na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịnweta ihe dị mma ikwu 🙂
Mee 15, 2007 na 8: 55 AM
Odi nma, a na m eji nke a saịtị m, na ọ rad. Naanị ihe m chọrọ, gbakwunye nke ọma. Daalụ maka ịme ụdị kọntaktị WordPress zuru oke !!
Mee 15, 2007 na 9: 12 AM
Bet nzọ, Shawn! More customization na-abịa! Ikike tinye ajụjụ ndị ọzọ ma hazie nhazi na ụdịdị ya!
Mee 17, 2007 na 11: 01 AM
Otu ihe m ga-achọ ịma: kedu ka ị si eme ka azịza gị rụọ ọrụ otu a? Ọ ga-amasị m inwe ike ịnwe nhọrọ ịzaghachi na azịza, wdg. Ọ dị oke mma.
Mee 17, 2007 na 11: 16 AM
Shawn, nke ahụ bụ azịza nde dollar! Edere m ezigbo ndị nọ na Akismet ma jụọ ha ma ha ga-achọ iso m rụọ ọrụ iji mepụta nke a maka nkọwa ma ha enweghị ịnụ ọkụ n'obi banyere ya.
Agbanyeghị, WordPress 2.2 nwere ike ikwu okwu nko nwere ike ị nwere ike mepụta ngwa mgbakwunye. Aga m igwu ala wee hụ!
Mee 18, 2007 na 4: 06 AM
Douglas, kedụ ka i si mara ụbọchị ọmụmụ m na-abịa?!?
Nke a amaka! Ihe kachasị mma! Ma mgbe m chere na ọ gaghị aka mma! 🙂
Mee 18, 2007 na 6: 13 AM
Birthbọchị ọmụmụ, Joni! Obi ụtọ ịnụ ya. More na-abịa! Jide n'aka lelee oru m ndi ozo!
Jun 4, 2007 na 9: 50 PM
M gbakwunyere ọhụụ ọhụrụ n'abalị a na igbe nhọrọ iji depụtaghachi onwe gị na ntinye.
Jun 7, 2007 na 1: 49 PM
Hey Doug- N'ezie ọ bụ nwa oge. M gbabara n'ime ngwa mgbakwunye a mgbe m na-achọ nyocha. Nnukwu ọrụ na ya.
Ajụjụ: kedu otu esi tinye ndepụta ndọda dịka ị kwuru? ànyị kwesịrị ịbanye na ibe ịkpọtụrụ anyị ma tinye naanị '(Nhọrọ A | Nhọrọ B | wdg…)? Ọ dị ka ọ naghị arụrụ m ọrụ. N'ụzọ doro anya, ọ na-efu ihe.
Jun 7, 2007 na 2: 05 PM
Nke ahụ bụ akụkụ nke ọhụụ ọhụrụ, Dean. Y’oburu na inwere ohuru ohuru - ee, ipuru itinye ihe gi n’ile ma tinye ya mmiri ogwu site na iji Pipe.
Jul 3, 2007 na 2:48 PM
ọ ga - ekwe omume 'igbutu' ngwa mgbakwunye a ka o wee gụọ dị ka:
'E-mail gị: [igbe ntinye ederede] [nyefere bọtịnụ]' ?????
dị mfe. onye ọrụ na-etinye email ha n'ime igbe ahụ, a na-ezigara ya otu n'ime ozi ịntanetị anyị, ka onye ọrụ ahụ sonyere na ndepụta nzipu ozi (nke anyị ji aka anyị tinye).
nke a ọ tere aka iji ụzọ mgbakwunye WP maka ọrụ dị mfe?
Ọzọkwa, mgbe mmadụ kụsịrị bọtịnụ 'nyefere' na peeji ha ka a na-ewega? ma ọ bụ na-enyocha nrubeisi?
nwee obi ụtọ maka enyemaka gị!
Jul 3, 2007 na 8:34 PM
Echere m na ị were aka ekpe aka ekpe ebe… nke a abụghị mgbakwunye ntinye email, ọ bụ ngwa mgbakwunye kọntaktị. Ihe ndenye aha email ga-amasị m, m ga-akwado Feedburner.
Jul 24, 2007 na 1: 36 AM
Thanx maka nnukwu ngwa mgbakwunye ahụ. Bụ ihe kacha otu. Nwere ike ịhụ ya na ọrụ na saịtị m kwa. Belata ọtụtụ nsogbu spam.
Sep 4, 2007 na 9: 50 AM
Ndewo, achọrọ m ụdị nkọwa maka saịtị ndị na-ede akwụkwọ nke WordPress. Ọ ga-amasị ha inwe ụdị abụọ maka otu abụọ dị iche iche na-eji saịtị ahụ.
Nke a enwere ike iji ngwa mgbakwunye gị?
Sep 8, 2007 na 8: 04 AM
Emelitere na 2.0.7 taa. Versiondị a na-eji wp_mail - nnukwu mgbanwe ekele Kpọọ Macdonald. Maka unu niile ndị na - enwe nsogbu na mail na - arụ ọrụ na onye ọbịa gị - nke a kwesịrị ịme aghụghọ!
Ọkt 7, 2007 na 1:38 PM
Nnukwu ngwa mgbakwunye,
Ọ ga-amasị m iji ụdị abụọ n'otu weebụsaịtị, ọ ga-ekwe omume?